Ogaden News Agency (ONA) – Gudomiye Kuxigeenka JWXO oo Kulan Laqaatay Jaaliyada S.Ogadenya ee Wadanka Denmark.
Gudomiye Kuxigeenka JWXO oo Kulan Laqaatay Jaaliyada S.Ogadenya ee Wadanka Denmark.
Posted by ONA Admin	/ April 23, 2015
Gudoomiye Kuxigeenka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) Dr.Maxamed Ismaaciil Cumar oo socdaal shaqo oo dhawr bari ah kujooga wadanka Denmark ayaa shalay ooy taariikhdu ahayd 22/4/2015 shir balaadhan laqaatay Jaaliyada Somalida Ogadenya ee wadanka Denmark. Shirkan ooy kasoo qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada Somalida Ogadenya ee kudhaqan wadanka Denmark sida Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenya ee OYSU iyo Ururka Haweenka Ogadenya (UHO).
Shirkan oo ahaa mid si heersare ah loosoo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxda iyo hawlwadeenada JWXO ee ka hawlgala wadanka Denmark. Waxaa kaloo iyaguna siwayn ooga muuqday madasha shirku kasocday dad wayne farabadan iyo waliba marti sharafta lagu marti qaaday shirka. Kulankan oo ahaa mid abaabul iyo wada tashi ah ayaa lagu soo bandhigay barnaamij aad uxiisa badan.
Furitaankii shirka kabacdi waxaa sidiiran cod baahiyaha loogu soo dhaweeyay Gudoomiye Kuxigeenka JWXO Dr.Maxamed Ismaaciil Cumar. Wuxuu Gudoomiyuhu lawadaagay ka qaybgaleyaasha shirka khudbad aad uqiimada oo meelo badan taabanaysa. Wuxuu Gudoomiyuhu aad ooga warbixiyay xaalada uu Halganka Somalida Ogadenya marayo iyo sidii marxaladan kala guurka ah looga hawlgali lahaa. Khudbadii Gudoomiye Kuxigeenka kabacdi wuxuu si waafi ah ooga jawaabay dhamaan su’aalihii dad waynuhu ay waydiiyeen.
Dr.Maxamed Ismaaciil Cumar ayaa mudooyinkan kujira socdaal shaqo uu ku kormeerayo Jaaliyadaha Somalida Ogadenya iyo ururada bulshada ee hoos taga Jaaliyadaha ee qaarada yurub. Waxaa lagu wadaa inuu Gudoomiye Kuxigeenku ooga sii gudbo qaar kamid ah wadamada Yurub kadib markuu soo gabagabeeyo booqashadan uu kujoogo dalka Denmark.